Nhau - Kunzwisisa Mhando dzakasiyana dzeRuka
Saka chii chinogadzira jira remvere? Micheka yemvere dzakarukwa, uyezve rimwe divi rinokweshwa kusunungura tambo uye kugadzira kurara (kumusoro kwakasimudzwa) kwekunzwa, zvakapfava kunzwa. Yezvekutanga sweatshirt masiketi uye sweat bhurukwa, kazhinji mukati mehembe kwakakweshwa kuti unzwe kudziya uye kupfava pakanangana neganda. Hembe-dzakapetana-mbiri dzakapfekerwa kazhinji dzinonzi mvere dzemakwai dzakakweshwa pamativi ese.
Mvere dzinogona kugadzirwa nemhando dzakasiyana dzezvinhu zvakasiyana. Sweatshirts uye sweatpants zvinowanzoitwa zvekotoni / polyester musanganiswa, nepo dzakapetwa dzemvere dzemabhachi nemabhurugwa zvinowanzova zana muzana polyester. Kune eco-inoshamwaridzika nhunzi uye nhunzi dzakagadzirwa kubva kuzvinhu zvakashandiswazve. Mukupedzisira, iyo yakapfava yakarukwa jira inogadzira dehwe kwete izvo zvigadzirwa zvaigadzirwa kubva.
Kunze kwekugadzirwa kubva kwakasiyana zvigadzirwa, machira "emvere" anouya mune hwakawanda hwehukobvu uye plushness. Sezvaunotenga zvipfeko zvebvudzi, iwe unowana mhando dzinoverengeka dzedehwe. Heano mamwe emhando dzakakurumbira dzemvere dzemakwai:
Cotton, polyester uye donje polyester yakasanganiswa nemvere. Mvere dzemakwai dzinonyanya kushandiswa dzedikita nesweatshirt, nhunzi dzakagadzirwa kubva kukotoni kana musanganiswa wedonje dzine nzvimbo yekunze yakatsetseka uye neputi yemukati yakapfava.
Microfleece. Microfleece ibvudzi-mativi emvere rakatetepa uye rakapfava. Nekuti haina huremu uye inoita basa rakanakisa rekutsvaira hunyoro kure nemuviri, microfleece isarudzo inozivikanwa yehembe dzekuita.
French terry bvudzi. French terry dehwe haina kusukwa pamativi ese maviri, saka inoshaya yakajairwa fluffy nap yehuwandu hwakawanda. Iyo yakatetepa uye inogara yakapfava pane dzimwe nhunzi.
Velvet bvudzi. Velvet dehwe rine kupenya kutaridzika. Inozivikanwa pakati pechiuno zvigadzirwa.